Maxitrol - आँखा एंटीबैक्टेरियल प्रभाव संग
"मैक्सिट्रोल" (आंख बूँदहरू) आधुनिक नेत्र विज्ञानमा एक एंटीबैक्टेरियल एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । ड्रपहरूसँग पनि भ्रामक प्रभाव छ।
"मैक्सिट्रोल" (आंख बूँद): ढाँचा र संरचना
औषधि प्लास्टिक बोतलों मा उत्पादन को लागी पांच मिलिटर को क्षमता संग छ। बोतल एक सुविधाजनक ड्रपर छ। आँखा ड्रपहरूको उपचार गुणहरू तिनीहरूको सक्रिय पदार्थहरू - डेक्समाथोन, नेमीसिन सल्फेट र पोलिमेइक्सिन बी सल्फेटले बताईएको छ। सहायक पदार्थहरू बिग्रिएको पानी, पोलिसेरोबेट र तटस्थ Additives द्वारा प्रतिनिधित्व गरिन्छ।
"मैक्सिट्रोल" (आंख बूँद): प्रयोगको लागि गुण र संकेत
माथि यो औषधि को लगातार एंटीबैक्टेरियल गुण उल्लेख गरिएको। सक्रिय घटकहरू रोगजन्य जीवाणुहरूको गुणन रोक्न। यो ध्यान दिइन्छ कि औषधि प्रभावी मात्र हुन्छ यदि रोगजन्य सूक्ष्मजीवजीहरू यसमा संवेदनशील हुन्छ। यसैले, एक नियमको रूपमा, डाक्टरले जीवाणुलाई ब्याक्टीरियाको संवेदनशीलताको लागि परीक्षा दिन्छन् र त्यसपछि मात्र यो रोगीलाई प्रदान गर्दछ।
अर्कोतर्फ, "Maxitrol" (आँखा ड्रपहरू) एकदम छिट्टै अनुहारको ऊतकहरूको सूजन प्रक्रिया रोक्छ र सबै साथका लक्षणहरू हटाउँदछ।
"मक्टिट्रोल" लाई ब्याक्टेरियल कोलोक्रेटिभाइटिस र केराटोकोन्जनितिकिटिटहरू प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो आँखाको कपाल, केराटाइटिस र ब्लीफेरिइटिसको सूजनमा पनि प्रभावकारी हुन्छ। एक प्रोफालोक्सिसको रूपमा, आंखहरू भन्दा अगाडि अपरेसन पछि ड्रपहरू प्रयोग गरिन्छ - यसले संक्रामक रोगहरूको विकासलाई रोक्न मद्दत गर्दछ।
आँखा ड्रप "मैक्सिट्रोल": प्रयोगको लागि निर्देशन
औषधि प्रयोग गर्न सजिलो छ। आँखालाई डिप्रिप गर्न आवश्यक छ ताकि तरल कोजवाटिकल थैलीमा छ - आँखाको ढोका र पिक्सेलको पछिल्लो सतहको बीच। सुविधाको लागि, तपाईं आफ्नो पिक्सेल आफ्नो औंला र सूचकांक औंला संग पकडाउन सक्नुहुन्छ।
खुट्टाको लागी, केवल इलाज गर्भपतनविज्ञानीले यहाँ निर्णय गर्ने अधिकार छ। हल्का सूजन र हल्का रोगको साथ यो प्रत्येक 4-6 घण्टा आँखाहरू तुरुन्तै सिफारिस गरिन्छ। यदि रोग गम्भीर छ भने, तत्काल मात्रा को मात्रा बढ्न सकिन्छ - प्रक्रिया हरेक घण्टा सम्म गरिन्छ, दैनिक खुराक लक्षणहरूको क्रमशः हराइरहेको छ।
"मैक्सिट्रोल" (आंख बूँद): विनाशकारीता
यो उपकरण प्रत्येक रोगी द्वारा प्रयोग गर्न सकिँदैन। तैयारी विशेष रूप देखि एंटीबैक्टेरियल गुण हो, यो कम से कम बेकार छ कि यो वायरल वा फंगल संक्रमण को उपस्थिति मा लागू गर्न को लागी, र केहि मामलाहरु मा यो शर्त बदतर हुन सक्छ।
उदाहरणको लागि, यदि रोगी वायरल र कवक रोगहरू, आँखा नखोला भने यसलाई प्रयोग गर्न कडा रूपमा निषेध गरिन्छ। आँखाहरु मा जटिलताहरु संग दबाइ, चिकन पोक्स या सानोपोक्स, तपेदिक को उपस्थिति मा दबाइ को दबाइ छ।
क्यान्सर विदेशी निकायबाट हटाउने औषधि प्रयोग गरिएन। यो पनि एक purulent प्रक्रिया को विकास मा contraindicatedated छ, जो neomycin सूक्ष्मजीव को अपमानजनक कारण हो। एक purulent corneal अल्सर को विकास गर्दा उत्पादन प्रयोग नगर्नुहोस्।
ग्लूकोमा, मोतीबत्ती र रोगको वृद्धि बढेको इन्टरनेसनल दबाबले रोगीहरूको लागि सावधानी संग छोडिएको छ। गर्भवती स्त्रीको शरीरमा लागूपदार्थको प्रभाव पूर्णतया बुझ्न सकिएन।
आँखा ड्रप "मैक्सिट्रोल": साइड इफेक्ट
अधिकतर अवस्थामा, प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू एलर्जी हुन्। शायद पिक्सेल को edema को उपस्थिति , mucosa र खुट्टा को पुनरुत्थान । अर्को पक्ष प्रभाव आन्तरिक दबाव बढेको छ। यदि दस दिन भन्दा बढी औषधिको लागी औषधि प्रयोग गर्नु आवश्यक छ भने, म्यानुअलले नियमित रूपमा आँखाको दबाब परिवर्तन गर्न एक प्रक्रिया गुमाउनु पर्छ । कहिलेकाँही, त्यहाँ माध्यमिक संक्रमणको विकास हो, तर केवल औषधि र लामो समयको प्रयोगको अनुचित संयोजन संग।
आँखा ड्रप "Maxitrol": समीक्षा
यस औषधी विभेदको बारेमा रायहरू - केही रोगीहरू प्रायः सुधारमा ध्यान दिन्छन्, अरूले प्रभावको कमीलाई गवाही दिन्छन्। सम्भावित औषधिको अक्षमता यसको गलत अनुप्रयोगद्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
'Lincomycin': प्रयोगको लागि निर्देशन
त्यहाँ छोराछोरीको लागि केही राम्रो भिटामिन के हुन्? भिटामिन जटिल "जंगल"
औषधि "Afobazol"। साइड इफेक्ट र अधिमात्रा
दबाइ "Ibuklin छोराछोरीलाई": प्रयोगको लागि निर्देशन
"Paracetamol" चिकित्सा। चिकित्सा प्रयोग
"Mydocalm" - झिल्ली-स्थिर प्रभाव र Valium उत्पादन गर्ने एक दबाइ
सहज होटल, "गुलाब फारम": Krasnaya Polyana मा सबै भन्दा राम्रो परिसर सूची
Multiroom "Rostelecom" - के यो र कसरी प्रयोग गर्ने हो?
सान्टा क्लाउस बारेमा क्रिसमस परी कथा: प्लट को वर्णन, लेखक
पुन: सुरु गर्ने कसरी लेख्ने? एक निरपेक्ष पुन: सुरुवात संग काम गर्ने छैन
सत्य कति "YouTube" मा ब्लगर कमाता
Gustafsson Aleksandr - एमएमए को स्वीडिश तारा
को laity लागि व्रत: उहाँले खान भनेर हुन सक्छ, र के छैन?
सुलेमानको छाप: उमेर को रहस्य
तिघ्रा सुरक्षा: प्रजाति विवरण
काला सागर मा के बिन्दुमा राम्रो छुट्टी हुनेछ? Annunciation: मनोरञ्जन, आवास, मूल्यहरू
वर्ण पराल टोपी डाकू बारेमा "भ्यान Pease," वा सानो
पोलक roe। उपयोगी गुणहरू, contraindications। नुन पोलक roe रूपमा?